PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-08-27 - Amasatma abuyise ithemba kwi-regga
Amasatma abuyise ithemba kwi-regga
Ilanga langeSonto - 2017-08-27 - Izindaba - THANDI ZONDI
UMCULI we- reggae uthi ukuqokwa kwakhe emncintiswaneni wezindondo, isouth African Traditional Music Awards (SATMA) kubuyisa ithemba kulolu hlobo lomculo.
Umaqhawe Ngcobo ( osesithombeni) uthi ukudlula emhlabeni kwenkakha yomculo wereggae eningizimu Afrika ulucky Dube kuthande ukubaphindisela emuva. Uthi lokhu ukuzwa ngisho kubasakazi besho bethi selokhu kwahamba leli qhawe akekho omunye oyoke afinyelele kulo.
“Umbuzo obe usufika kimina ngothi lokhu bakwazi kanjani ngoba kabazihluphi ngokuba badlale umculo wethu, uduvile kabawenzi lutho. Zimbalwa iziteshi zomsakazo ezinohlelo lomculo we- reggae, kwezinye udlalwa ebusuku abantu sebelele,” kuchaza yena.
Uthi umphakathi mawunikwe ithuba lokuzikhethela umculo, kungathiwa umculo wabo kawunamakethe.
“Lo onemakethe yingoba udlalwa njalo, uma nowethu unikwa ithuba elilinganayo ngeke singabi nemakethe le okuthiwa kayikho,” kusho yena.
Ekhuluma ngokuqokwa kwakhe kumaSatma uthe unethemba lokuthi lokhu kuzovulela namanye amaciko kulo mkhakha indlela eya phambili.
“Ngijabule kakhulu ngaleli thuba eliyingqayizivele engilitholile. Lokhu kuzogqamisela neziteshi zomsakazo ukuthi ireggae idinga ithuba. Uthi uqokwe nge- album yakhe yesibili esihloko sithi Our Prophet okungeyokuhlonipha ulucky Dube enezingoma ezilishumi.
“Ngethemba ukuthi sesizohlonishwa kuleli nje nasemazweni angaphandl Dube bewudlalwa kakhul nda kushona kodwa manje lu anayo isemazweni anga li,” kuphetha umaqhawe.